#GetVaccinated Mushandirapamwe Unowana Vanopesvedzera Mainstream Ruremekedzo | Martech Zone
Chitatu, October 6, 2021 Chitatu, October 6, 2021 Alexander Frolov
Kunyangwe iyo yekutanga COVID-19 yekudzivirira yakapihwa muUS muna Zvita 2020, nhamba dzepamusoro-soro muvaraidzo, hurumende, hutano, uye bhizinesi vaikurudzira vekuAmerica kuti vabaiwe jekiseni. Mushure mekuvandudzwa kwekutanga, zvakadaro, kumhanya kwejekiseni kwakadonha kunyangwe majekiseni akave achiwanika zvakanyanya uye rondedzero yevanhu vaikodzera kuawana ichikura.
Kunyangwe pasina huwandu hwesimba hunogona kugutsa munhu wese anokwanisa kubayiwa nhomba kuti aite zvakadaro, kune mamwe mapoka evanhu vanogona kunyengetedzwa, kwete neanoshambadzira mabhana kana Dr. Anthony Fauci. Mukuremekedza ikoko, kusundira vanhu kuti vabaiwe jekiseni kwakaburitsa kusakwana kwePPR yakagadzwa, kushambadzira, uye nzira dzekushambadzira mukusvitsa huwandu hwevanhu uye, mukuita kudaro, vakawana svikiro riri kubuda - vezvenhau vevanokurudzira - kugamuchirwa kukuru nekutenda.
Kutenda muchikamu chikuru kune a $ 1.5 billion PR uye blitz yekushambadzira yakatangwa neWhite House munaKurume 2021, 41% yevagari vakabaiwa zvakakwana pakupera kwaMay, zvinoenderana nedhata kubva kuCentre for Disease Control and Prevention (CDC). Asi kushanda kwezviitiko zvetsika zvekushambadzira kwakaratidzika kuderera sezvo zhizha raiswedera, uye kumhanya kwejekiseni kwakadzikira.
IWhite House yaida nzira nyowani, yekuvhiya kugadzirisa homwe dzekudzivirira kusava nechokwadi uye kuzeza kwaive munyika yese. Iwo manejimendi akafunga kutora uto revapikisi kuti vadzokere kumashure pane zvisina kufanira nezvejekiseni uye nekuwedzera kuziva pakati pemapoka ayo ongororo yavo yakaratidza kuti vaipokana nekutora mushonga kwete nekuda kwechitendero kana dzidziso yezvematongerwo enyika, asi nekuda kwezvimwe zvikonzero zvemunhu.
Nhengo dzeGen Z dzakachema chema nenyaya yekuti vakuru vezvehutano vange vasiri kuendesa meseji yavo kune iyo Instagram chizvarwa. Semuyenzaniso, mukadzi ane makore makumi maviri nemaviri akataurwa mune yesainzi-yakanangana nenhau Stat muna Kubvumbi akataura kuti hapana kana mameseji panguva iyoyo akatsanangura kuti sei ane makore 19 okuberekwa achifanira kuwana mushonga.
Kutarisa pa Instagram data kunobatsira pakunzwisisa kuti nei White House yakashandukira kune vanokurudzira kuti vasvike vanhu vakaita saiye, uye inobatsira kuratidza kuti danho iri rinoratidzika kunge rakapararira zvakadii munzvimbo ine simba. Mumwedzi misere yekutanga ya2021, 9,000 Instagram vanokurudzira muUS vakaita huwandu hwakawanda hwe14,000 mbiru dzichikurudzira vateveri vavo kubayiwa nhomba nekubatanidza ma hashtag #vaccinated, #getvaccinated, #vaccineswork, #fullyvaccinated uye #getthevax. Iwo maposta ainangidzirwa kune vateereri vanosvika vangangoita mamirioni makumi matanhatu nemapfumbamwe, avo makumi matatu kubva muzana vaive muboka rezera re61-32 yemakore. Makuru machunks eiyo nhamba akauya kubva mumaposita nemazita emhuri saReese Witherspoon, ane vanopfuura mamirioni mana vateveri, uye Oprah Winfrey, ane mamirioni matatu nehafu.
Asi munyika ine simba, yakakura haisi kugara iri nani. Zvakakosha sekukura kwevateereri ndeyekuti 58% yezvinyorwa haina kuuya kubva kumazita emarquee asi kubva kune nano-vanokurudzira, avo vane vateveri vanoverengera pakati pezviuru kusvika zviuru gumi. Vateveri ve nano-vanokurudzira vanozivikanwa kuva kwazvo akavimbika uye akavimbika, kuratidza mwero wekuzvipira uye, hongu, kufurira izvo kunyange anodiwa Dr. Fauci asingakwanise kubata. Nekugovana zvavo nyaya dzejekiseni ravo, uye nekukurudzira vateveri vavo kuti vafunge nezvazvo, vanokurudzira vakaratidza chokwadi chisingawanikwe mumishandirapamwe inotsigirwa nehurumende kana zviremera-zvepamutemo zvakakumbirwa nejoni rekurapa.
Kuti zvive pachena, vanokurudzira havana kunge vari sirivheri bara mukusundira kuti vanhu vabaiwe jekiseni. Kunyange hazvo majekiseni ekudzivirira akakwira kusvika pa41% mumwedzi mishoma mushure mekunge majekiseni aya awanikwa kuruzhinji, huwandu hwevanhu vekuAmerican vakabaiwa nhomba hwakakwira chete ne14% pamwedzi mishanu yapfuura [kusvika 9/20]. Sezvo chero mushambadzi akanaka achakuudza, kutya kunotengesa, uye zvisirizvo uye anti-kubaiwa rhetoric ichiparadzirwa kwese kwese kubva pamateya nhau kuenda kukireshi makirasi anovimbisa kuti iyi inyaya yatisingazombosvika pakubvumirana kwenyika.
Chiyero chekudzivirira pakati pevechidiki vane makore gumi nemaviri kusvika gumi nemanomwe, imwe yehuwandu hwevanhu veWhite House vaitarisira kunongedza vachishandisa vanokurudzira, yakakura kubva pa18% pakati paJune kusvika pa45% kubva munaGunyana 20 zvinoenderana neCDC data. Uye zvisinei nenhamba uye zvikamu, hapana mubvunzo kuti vanokurudzira vane mukana wakakura wekushandisa chikuva chavo zvakanaka. Kuparadzira meseji ine pfungwa munharaunda iyo ine tariro yekunyengetedza vanhu vemuAmerica kuti vazvidzivirire kubva ku COVID-19 unongova muenzaniso unooneka kusvika nhasi, uye zvirokwazvo hauzove wekupedzisira.
Nekudzoka kwehukama hwehukama uye masiki mvumo nekuda kweiyo Delta musiyano wehutachiona, mabrands nemabhizimusi angave akachenjera kutevera kutungamira kweWhite House uye kufunga nezvevanokanganisa chinhu chakakosha mukuyedza kwavo kukurudzira vanhu kuti vabaye jekiseni, tisingataure chishandiso chinowedzera kukosha mukushambadzira kwavo kwakawanda uye bhokisi rezvekudyidzana neruzhinji bhokisi rekuenderera mberi.
Tarisa uone ongororo ichangoburwa yeHypeAuditor ye1,600 yepasirese vanopesvedzera, ichipa ruzivo rwevanokurudzira nzira dzakasarudzika dzekutaurirana nemaki.
Dhawunirodha HypeAuditor's Influencer Yekushambadzira Ongororo Mhedzisiro
Tags: getvaccinatedhypeauditorkushambadzira kushambadziravaccinationkushambadza wekudziviriravax